जिल्ला अ’दालत काठमाडौंले मोडेल खुस्बु ओलीलाई दुई वर्ष कै’दको फैसला ‘सुनायो! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
जिल्ला अ’दालत काठमाडौंले मोडेल खुस्बु ओलीलाई दुई वर्ष कै’दको फैसला ‘सुनायो!
काठमाडौं ! मोडल खुस्बु ओलीलाई जिल्ला अ’दालत काठमाडौंले दुई वर्ष कै’दको फै’सला सुनाएको छ। लेनदेन वि’वादमा रकम नतिरेपछि ओलीलाई शुक्रबार अदालतले २ वर्ष कै’दको फैसला सुनाएको हो।
सप्तरीको राजविराज-८ का ४३ वर्षीय गोपाल कटुवाल र मोडल खुस्बु ओलीबीच एकताका राम्रै सम्बन्ध थियो। बेला–बेलामा उनीहरुबीच रकम ले’नदेनसमेत हुने गरेको थियो। सोही क्रममा झन्डै २ वर्षअघि ओलीले कटुवाललाई आफूले घरजग्गा किन्न लागेको र त्यसका लागि रकम अपुग भएको भन्दै सापट मागिन्। कटुवालले ओलीलाई ३६ लाख रुपैयाँ दिए।
ओलीले उक्त रकमको सावाँ–ब्याजसहित फिर्ता गर्ने बाचा कटुवाललाई गरेकी थिइन्। कटुवालले आफूले दिएको सापट रकम मागेपछि ओलीले कुमारी बैंक न्युरोड शाखाको ३६ लाख रुपैयाँको चेक दिइन्। खुस्बु ओली नाममा रहेको खाता नम्बर मार्फत् उनले ३६ लाख रुपैयाँको चेक काटेकी थिइन्। उक्त चेक २०१७ जनवरी ३ तारिखमा काटेको देखिन्छ। त्यसको दुई दिनपछि कटुवाल चेक साट्न कुमारी बैंक पुगेका थिए। तर, बैं’कले रकम नभएको भन्दै उनलाई फर्काइदियो।
पछि पटक–पटक फोन गरेर पैसा जम्मा गर्नभन्दा पनि ओलीले रकम जम्मा नगरेको कटुवालको भनाइ छ। त्यसपछि कटुवाल २०१७ जनवरी १९ तारिखमा पुनः चेक साट्न बैंक पुगे। तर दोस्रो पटक पनि उनी त्यसै फर्किनु पर्यो । तेस्रो पटक पनि कटुवाल रकम निकाल्ने झिनो आशा बोकेर कुमारी बैंक पुगे। तर, उनी रित्तो हात फर्कनुपर्‍यो। तीन पटकसम्म पनि खातामा पर्याप्त रकम नभएपछि चेक बा”उन्स भयो।
चेक बा’उन्स भएको बारेमा समेत आफूले ओलीलाई जानकारी गराएको कटुवालले बताएका छन्। तर, ओलीले भने उजुरी नगर्नु रकम दिऊँला भन्दै आश्वासन दिइरहिन्। लामो समयसम्म पनि आफ्नो ३६ लाख नपाएपछि गत वर्ष साउनमा कटुवालले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चेक अनादर मु द्दा दा’यर गरे। विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा ५३ बमोजिम कटुवालले मु द्दा दायर गरेका थिए।
सोही मु द्दामाथि अदालतले गत जेठ ७ गते फैसला गर्दै ३ महिना कै दको फैसला सुनाएको थियो। फैसला अनुसार ओलीलाई ३ महिना कै द र ३ हजार ज’रिवाना सुनाइएको छ भने ३६ लाख चेक काटेदेखिको साँवा र ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने अ’दालतको ठहर थियो। तर अदातलको उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएपछि जेठ १६ गते कटुवालले पुन फै’सला कार्यान्वयन गरी पाउँ भन्दै जिल्ला अ’दालत काठमाडौंमा निवेदन दायर गरेका थिए।
त्यसपछि साउन १३ गते जिल्ला अदालतले म्याद तामेल गरी सम्बन्धीत वडामा पठाएको थियो । उक्त सूचना वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा समेत टाँस गरिएको थियो। त्यसपछि पनि ओली सम्पर्कमा नआएपछि वडासचिवमार्फत् उनकै घरमा म्या”द तामेली टाँस गरिएको थियो।
अहिलेसम्म पनि प्रतिवादी ओलीको जायजेथा प्राप्त गर्न नसेको र उनी सम्पर्कमा समेत नआएको भन्दै वादी कटुवालले जरिवाना र बिगो बमोजिम कै’द राखिपाउँ भन्दै गत पुस २८ गते जिल्ला अ’दालतमा पुन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उक्त मु’द्दाको फै’सला गर्दै ओलीलाई जिल्ला अ’दालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले शुक्रबार दुई वर्ष कै’दको फै’सला सुनाएको हो। यो समाचार नेपाल लाइभबाट साभार गरिएको हो ।
Previous ”भगवान् श’निदेवको दर्शन गर्दै आज – १७ फाल्गुण २०७६ श’निवार को राशिफल हेरौं !’
Next ह’नुमान जी को दर्शन गर्दै आज – २० फाल्गुण २०७६ मंगलवार को राशिफल हेरौं अनी शे’यर गरौं ! ॐ